Soo dejisan Equalizer + 2.5.3 – Vessoft
Soo dejisan Equalizer +
Barbaraha + – ciyaaryahan music MFT. Software wuxuu kuu ogol yahay in la xakameeyo 5 guutooyinkiisa oo inta jeer oo kala duwan, baadhidooda iyo kala soocaan heesaha oo ku saabsan qalabka, ciyaaro heeso ah ee asalka ah iwm barbaraha + ka kooban 11 goobaha heerka dhawaaqa oo u saamaxaaya in ay abuuraan kuu gaar ah. Software waxay bixisaa saturation ugu weyn ee Bass isticmaalaya cod-weyneeye ah inta jeer hooseeyo. Barbaraha + toos ah hoos u geliyaa mugga loo maqli u kala guurka organic dhexeeya heesaha oo ku.
Set Professional ah sida diirada u noocyo kala duwan oo muusig
5 urur barbaraha kala duwan weyn ee mawjadaha
Gacanta saxda ah ee mugga iyo awoodda Bass
Ciyaaryahanka music Integrated
Equalizer + Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... 4shared Desktop 3.24